I-Google Play iya kwazisa ii-icon eziguqukayo kwiiapps zayo | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izaziso
Ukuba sithatha uhambo ngeGoogle Play, siyabona ukuba ii-icon zesicelo zahluke ngokuphawulekayo kwimilo, nangona zonke zibonisiwe ngaphakathi kwesikwere, ukunika ivenkile ukufana okuthile. UGoogle wazise utshintsho evenkileni iinyanga ezimbalwa, kwenzeke njani kutshanje. Ngoku lungiselela utshintsho olutsha kwivenkile, ekufuneka ifike kungekudala.
Kungenxa yokuba ii-icon eziguqukayo ziya kwinqanaba elinye kuGoogle Play. Ikhampani, ezibazisile nge-Android Oreo, ufuna ukusebenzisa le migaqo ngoku kwivenkile yakho yeapp. Ngale ndlela, zonke ii-icon zeapps ezivenkileni ziya kuba nesimbo esifanayo ngawo onke amaxesha. Isitayile esinemiphetho ejikeleziweyo ekufuneka sisetyenziswe kuzo zonke ii icon. Ke ngoko, kugxilwe ngakumbi kumxholo we icon uqobo.
Kuba ixesha labaphuhlisi besicelo se-Android sokufaka ii icon zabo sele livuliwe. Ukuze ujonge ukuba ziyahambelana neemfuno ezintsha ezisekwe nguGoogle malunga noku. Yintoni egqithisile, Ukusukela nge-1 kaMeyi, zonke ii icon kufuneka zilandele ezi zikhokelo. Kwintengiso. Nge-24 kaJuni, inyathelo elilandelayo liya kuthathwa, ii icon ziya kuguqulwa zibe kwifomathi entsha.
Olu lutshintsho olulula. Into esinokuyibona kukuba ii icon kwiGoogle Play ngoku Kuya kufuneka babe nalo mjikelo ujikeleziweyo, njengoko ubona kumfanekiso ongentla. Olu luhlobo ekufanele ukuba lilandelwe ngumdlalo kunye neeapps ezivenkileni ukusukela ngoku. Ke abadali kufuneka basebenzise utshintsho, kwiimeko ezininzi.
Okwangoku akukabikho zinguquko evenkileni malunga noku. Kodwa ixesha lokuqalisa ukutshintsha ii-icon zivulwe izolo. Iya kuthatha iiveki ezimbalwa. Nangona ukusukela ngoMeyi 1 kuyakuba yinto yesiqhelo kwaye ngoJuni kuyanyanzeleka kuGoogle Play. Ke kusekho iiveki ezizayo.
Ukongeza, kuqikelelwa ukuba kule kota yesithathu yonyaka singazifumana sijamelene notshintsho olubalulekileyo kuGoogle Play. Kuba kukho amajelo eendaba aphawula oko Ivenkile icwangcisa ukutshintsha uyilo ngokupheleleyo. Asazi ukuba iyakwenzeka na, kodwa kuya kufuneka siyiphaphele loo nto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Iimpawu eziguqukayo ziya kufika kuGoogle Play